Global Voices teny Malagasy » Matahotra lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena, manova ny fahazaran’izy ireo ao amin’ny media sosialy ny mponin’i Hongkong · Global Voices teny Malagasy » Print
Matahotra lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena, manova ny fahazaran'izy ireo ao amin'ny media sosialy ny mponin'i Hongkong
Voadika ny 16 Oktobra 2020 6:34 GMT 1	 · Mpanoratra The Stand News Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Sary avy amin'ny Stand News, Nahazoana alalana. Image from the Stand News. Used with permission.
Ity tantara manaraka ity dia navoaka voalohany tao amin'ny The Stand News amin'ny teny Shinoa. Nadikan'ny Global Voices tamin'ny teny Anglisy izany ary ho avoaka eto ao anatin'ny fizarana efatra rehefa nahazo alalana.
Navadiky ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena Beijing ho tanànan'ny tahotra i Hong Kong
Hatramin'ny nampiharana azy tamin'ny volana Jolay, nosamborina ny olona noho ny fahatongavan'izy ireo fotsiny teo akaikin'ny toeram-pihetsiketsehana taloha.Nahemotra amin'ny taona ho avy ny fifidianana vaomieran'ny Mpanao lalàna. Nanao amboletra tao amin'ny biraon'ny Apple Daily, gazety mpomba ny demaokrasia ny polisy ary nisambotra ny mpanorina azy, Jimmy Lai  noho ny fiampangana azy ho mpiray tsikombakomba amin'ny hery ivelany. Nosaziana ireo mpampianatra noho ny fanehoan-kevitra mpomba ny demaokrasia tao amin'ny media sosialy.
Teo anelanelan'ny 29 Aogositra sy 1 Septambra, nanontany tamin'ireo mpamaky azy ny Stand News, tamin'ny alalan'ny andiana fitsapan-kevitra anjotra  hoe ahoana ny fiantraikan'ny fiarovam-pirenena amin'ny fiainan'izy ireo. Navoaka tao amin'ity tantara ity ny vokatry ny fitsapan-kevitra, izay olona miisa 2587 no namaly, ahitana tafatafa miaraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana, mpanao gazety, mpiasam-panjakana, mpampianatra sy ny hafa ihany koa ao anatin'izany. Tianay ho hita ny fomba fitantanan'izy ireo ny tahotr'izy ireo manoloana ny lalàna masiaka vaovao
Araka ny vokatry ny fitsapan-kevitra, niakatra ho 38,4 tamin'ny 30 Jona ny salanisan'ireo olona namaly nilaza fa “tena matahotra mafy” (ambaratonga 9) sy “diso matahotra mafy” (ambaratonga10) raha 23,4 izany tamin'ny 21 Mey, raha nanambara ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena i Beijing. Niakatra izany tamin'ny 29 Jolay, raha nosamborina noho ny fitarihana fisintahana ireo mpianatra mpikatroka miisa efatra.
Milaza ireo namaly fa ny loharanon'ny tahotr'izy ireo dia: Fanamelohana ny fanehoan-kevitr'izy ireo (96 isanjato), fanafoanana ny fahalalahan-gazety (93 isanjato), fanafoanana ny fihetsiketsehana sy fisamborana noho ny fihetsiketsehana (84 isanjato), fampodiana any Shina mba hotsaraina (77 isanjato), taterin'ny olom-pantatra ho “ratsy fitondrantena ara-politika” , ary ny fanarahamason'ny polisy (71 isanjato).
Anton'ny tahotra lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena, araka ny fitsapan-kevitra nataon'ny Stand News. Sary avy amin'ny Stand News, nahazoana alalana.
Raha ny fihetseham-po ateraky ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena, ireto no safidin'ny mpamaly: Fahatezerana (88 isanjato), ahiahy (75 isanjato), tsy fahatokiana(73 isanjato), fankahalana (70 isanjato), fahadisoam-panantenana (57 isanjato), tebiteby (51 isanjato), alahelo (50 isanjato), tahotra (43 isanjato), hafaliana (1 isanjato), sento (1 isanjato)
Nanontany ihany koa ny fitsapan-kevitra raha nandray fomba fiarovana azo antoka kokoa eo amin'ny fifandraisana ny mpamaky — 69 isanjato no namaly “eny.” Tafiditra amin'ny fahamailoana ny VPN (37 isanjato), mamakafaka ny fifandraisana media sosialy (28 isanjato), fampiasana fitaovam-pandefasan-kafatra voaafin-tsoratra toy ny Signal (28 isanjato), famafana ny diantsoratra amin'ny karajia (23 isanjato), manafina na mamafa tsanganambotoaty media sosialy (20 isanjato), mampîasa fomba fampiasa karajia miafina (12 isanjato), manova anarana fampiasa media sosialy (12 isanjato), manokatra kaonty media sosialy vaovao (8 isanjato), mampiasa SIM finday tsy nisoratana anarana (8 isanjato), ary fampiasana finday hafa hifandraisana amin'ny fomba azo antoka (6 isanjato).
Nandritra ny fihetsiketsehana fanoherana ny fampodiana hody any Shina tanelanelan'ny taona 2019 sy 2020 i “Rebecca” (tsy tena anarany) nanome tapakilan-tsakafo sy fanohanana ara-pihetsehampo tamin'ny tanora mpanao fihetsiketsehana mihoatra ny 50 izay antsoiny hoe “zanany” izy.
Rehefa nivoaka voalohany tamin'ny 30 jona ny antsipirian'ny lalànan'ny fiarovam-pirenena, tsapany fa mety ho tratran'ny olana izy noho ny nataony taloha — manome fitaovana na vola fanohanana ireo nanao heloka bevava voalahatra ao amin'ny lalàna azo anasaziana 5 ka hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina.
Mbola niseho tao Causeway Bay ihany izy ny ampitso hanao hetsika anoherana ny lalànan'ny fiarovam-pirenena. Fa tsy nanao akanjo mainty izy tamin'ity indray mitoraka ity fa nanao raoby.
Tahaka ireo mpanao fihetsiketsehana an'arivony maro, miezaka ny hifehy ny tahony i Rebecca amin'ny fandraisana fahamailoana vitsivitsy. Mba hisorohana ny mety ho fanohintohinana hahazo ny namany sy ny fianakaviany, dia noferany ny fifandraisany tamin'ireo. Na dia talohan'ny namelomana ny lalànan'ny fiarovam-pirenena aza, dia fafàny isan'andro hatrany ny hafatra saropady ao amin'ny findainy.
Saingy tamin'ny 30 jona, naka “finday matoatoa” efa misy SIM naloa vola mialoha izy. Nosoratany tamin'ny adiresy imailaka tsy misy anarana tena izy ny mari-panondroana (ID) Apple tamin'ny iPhone. Avy eo izy nizara iPhones hafa mitovitovy amin'izany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ampolony izay nanapa-kevitra ny hanohy ny fikatrohany.
Tamin'ny 30 jona ihany, nafindrany tao amin'ny finday matoatoa avokoa ny fifandraisana saropady rehetra ary nandefa hafatra tany amin'ny mpanao fihetsiketsehana hampahatsiahy azy ireo hamafa hatrany ny hafatra, hanaisotra ny famantarana endrika sy diam-panondro, hametraka kasinga famantarana roa amin'ny apps (fampiasa) rehetra, hametraka fomba famafan-tena amin'ny rehefa diso fampiditra tenimiafina im-polo, ankoatra ireo fepetra hafa.
Ankoatra ny fiarovana ara-pifandraisana, efa niomanan'i Rebecca ihany koa ny drafitra backup (ainga vaovao) raha sanatria voasambotra izy — nanome fitokisana namana iray izy nametrahana laharam-pamantarana sy laharam-pindain'ny mpisolovava hikarakara ny fandoavana solofonja. Nofeheziny tao amin'ny baoritra iray ihany koa izay zavatra rehetra mifandraika amin'ny hetsi-panoherana ary niangaviany ilay namany hanadio ny trano raha misy ny fisamborana.
Tamin'ny andro nanaovana fihetsiketsehana, nisakafo tao Causeway izy sy ny vadiny ary notazoniny ny tapakilan'ny restaurant fandrao misy ny fisamborana ka mila fanazavana hoe nahoana ry zareo no tao amin'ny faritra nanaovana fihetsiketsehana.
Rehefa tonga ao an-trano izy nahare vaovao fa maro amin'ny “zanany” no nosamborina tao amin'ny Times Square. Koa satria moa efa fomban'ny polisy ny mijery ny findain'ny mpanao fihetsiketsehana voasambotra sy ny kaonty media sosialy, nialàn'i Rebecca ny vondrona Telegram gmaro nandraisany anjara niaraka tamin'ireo nosamborina. Ravain'ny mpikatroka ao Hong Kong matetika ny vondrona media sosialy aotian'ny fisamborana mba tsy hampidi-doza ny tambajotrany.
Maromaro ny mpitantana Telegram nosamborina  ho “mandrisika hanao fivoriana tsy ara-dalàna” hatramin'ny nivakisan'ny hetsika fanoherana fampodiana olona hody any Shina tamin'ny taona 2019.
Raha avy ny fotoana, afa-mivoaka ihany ny “zanany” 30 ora aoriana rehefa tsy mety hanokatra ny findainy hojeren'ny polisy.
Manao fiainan-droa i Rebecca amin'izao fotoana izao — na eo amin'ny media sosialy na eo amin'ny tena fiainana, zara izy raha maneho hevitra politika sy fihetsiketsehana. Na aiza na aiza misy fakantsary fanarahamaso dia zavatra tsy misy idiran'ny politika ihany no ataony toy ny milalao anjotra. Saingy any an-takonana, mikarakara ny “zanany” izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/10/16/149880/
 Navadiky : https://globalvoices.org/2020/09/01/beijings-security-law-keeps-transforming-hong-kong/